भीम रावललाई फकाउन माधव नेपाल पुगे टोखा – SaipalNews.com
भीम रावललाई फकाउन माधव नेपाल पुगे टोखा
काठमाडौं ६ साउन । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष डा. भीम रावल सहभागी भएन् । रावल बैठकमा सहभागी नभएपछि वरिष्ठ नेता नेपाल डा. रावललाई पकाउन रावल निवास टोखा पुगेका छन् । आफूनिकट नेताहरुलाई बोलाएको बैठकमा रावल अनुपस्थित भएपछि नेता नेपाल आत्तिएर डा. रावललाई भेट्न बैठक सकिए लगतै टोखा पुगेका हुन् ।
साउन २ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुअघि नै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका रावल एमालेका नेपालसँग रुष्ट छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली पार्टी एकताका लागि तयार रहँदा पनि नेपाल नै चिढिएपछि एकता भंग भएको रावलले बताएका छन् ।
पार्टी एकता गर्न बनाइएको १० बुँदे सहमति नेता नेपालकै कारण असम्भव भएको नेता रावलको ठहर छ । साउन २ गते प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनु र पार्टी एकता गर्न १० बुँदे कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओली लचक हुँदा नेता नेपालले आफूनिकट सांसललाई संसद जोगानका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिन उर्दी जारी गरेका थिए ।
पार्टी एकताको अन्तिममा घडीमा नेता नेपालले दिएको निर्देशन गलत भन्दै रावलले त्यहीँ दिन सभामुख अग्नि सापकोटालाई सांसद पदबाट राजीना पत्र बुझाएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनको राजीनामा पत्र स्वीकृत भएको छैन ।
बालुवाटारमा ओली, दाहाल र खनालबीच छलफल हुँदै
संसद् विघटन राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने प्रयत्न : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँको कलंकी केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
मनमोहक र प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम : नुम्बुर हिमाल
बल्खु खोलामा पुरुषको शव फेला, हत्या आशंका
भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हाल्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली
अधिकांश दुर्घटनामा किन दुइपाङ्ग्रे चालकको बढी मृत्यु हुन्छ ?
बालुवाको ढिस्कोमा पुरिएर ४ नेपाली मृत्यु
विम्स्टेक सम्मेलनका लागि राजधानीमा यस्तो छ सुरक्षा तयारी